Isilinda enkulu yeshawari yelanga
Imilinganiselo yepleyiti esezantsi: 20 × 20 × 0.8cm
Ubunzima bomzimba: malunga. I-10 Kg
I-KR-09 Ibhokisi ibhokisi 680 11.0 10.0 1.00 113.50 44.00 21.00
Ukuqinisekisa ubomi babo bokusebenza kunye nokuzinza, iishawari zethu zelanga zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, kubandakanya ubhedu olunganyangekiyo umhlwa kunye nemibhobho ehlanganisiweyo yePVC. Unokuqiniseka ukuba umgangatho weemveliso zethu ungaphezulu komgangatho wentengiso.
Ishawa yelanga yangaphandle i-100% inikwe amandla lilanga. Tube eyenziwe ngezinto ezikhethekileyo ifunxa amandla elanga, iwuguqula ube bubushushu, kwaye ifudumeza amanzi ngaphakathi kubushushu obumalunga ne-60 ℃. Ayisebenzisi iingcingo kunye neebhetri
Abantu bobukhulu obahlukeneyo kunye nemikhwa yokuhlamba baneemfuno ezahlukeneyo zendlela yokuhamba xa uhlamba. Ukutshiza okuphezulu kunokujoliswa ngokwendlela yokuhlanjwa kwabantu kunye nokuphakama. Uyilo lomntu lwenza ishawa yangaphandle ibe lula ngakumbi.
Lonke uyilo olumnyama
Bonke abamnyama bathetha isitshixo esiphantsi kwaye silula, esisebenza kuwo nawuphi na umsitho. Inokubekwa elunxwemeni, egadini kunye nakwicala lokuqubha okanye kuyo nayiphi na indawo ocinga ukuba kufanelekile.
Egqithileyo Ishawa yelanga
Okulandelayo: Ukuhlanjwa kwesiqingatha selanga